यो तयारीले सागमा नेपालको उपस्थिती मजबुत होला ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV यो तयारीले सागमा नेपालको उपस्थिती मजबुत होला ? | Sagarmatha TV
यो तयारीले सागमा नेपालको उपस्थिती मजबुत होला ?
बीरेन्द्र जैरु, काठमाडौँ । नेपालले आयोजना गर्ने जिम्मेवारी पाएको १३ औ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय टिम तयारीको प्रारम्भिक प्रशिक्षण चलिरहेको छ । आगामी मंसिर १५ गतेदेखि आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि जेठको पहिलो साताबाटै बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने भनिएपनि विभिन्न खेल संघको आन्तरीक विवादका कारण प्रतियोगितामा समावेश २७ खेल मध्ये १४ खेलका खेलाडीले मात्रै प्रशिक्षणको अवसर पाएका छन् । यसपटक सागमा नेपालले २७ खेलमा सहभागीता जनाउँदै छ । तर, प्रतियोगीताका लागि करिव ५ महिना मात्रै बाकीँ रहदा समेत १४ खेलका खेलाडी मात्रै तयारीमा जुटेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अहिलेसम्म तेक्वान्दो, स्क्वास, जुडो, भारोत्तोलन, पाराग्लाईडिङ, आर्चरी, सुटिङ र टेबलटेनिस, करातेलगायत १४ खेलको प्रशिक्षण सुरु गरेको छ ।
उसो त, जेष्ठको पहिलो साता सबै खेलको प्रशिक्षण सुरु गर्ने भनिएपनि बजेट अभावका कारण तेस्रो साता मात्र ७ खेलको प्रशिक्षण थालीएको हो । खेल संघहरुले खेलाडीको नामावली समेत समयमै टुंगो लगाउन नसक्दा अन्य खेलको प्रशिक्षण सुरु गर्न नसकिएको राष्ट्रिय टिम तयारीका उपनिर्देशक बाबुराम नेपाल बताए । कतिपय खेल संघहरुले नामावली बुझाएपनि अन्य आवश्यक प्रक्रिया नपुगेका कारण प्रशिक्षण सुरु गर्न नसकिएको उनले बताए । अब एकहप्ताभित्रै सबै प्रक्रिया पुरा गरी खेलाडीको नामावलीसहित पठाउनुपर्ने खेलसंघहरुलाई भनिएको उपनिर्देशक नेपालले बताए । असार पहिलो साताभित्रै सबै खेलको प्रशिक्षण सुरु गरिसक्ने तयारीमा राष्ट्रिय तयारी टिम रहेको उनको भनाई छ ।
यसपटक सागको तयारी प्रशिक्षणमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका खेलाडी समेत समावेश छन् । तर, प्रतियोगिता नजिकिएपछि सिमित पुर्वाधार र बजेटको भरमा थालीएको तयारीले राम्रो नजिता ल्याउला भन्नेमा स्वयं खेलाडीहरु नै ढुक्क छैनन् । प्रतियोगिताको मुखैमा हुने छोटो समयको तयारी नेपाली खेलाडीका लागि नियति नै बनेको भन्दै भारत्तोलन खेलाडी तारा देवी पुनले राज्यले खेलप्रतिको गर्दै आएको वेवास्ताप्रति गुनासो गरिन् ।
त्यस्तै वर्षमा आयोजना हुने एक दुई वटा प्रतियोगिताले मात्रै खेलाडीको खेल्ने स्तर नबढ्ने तेक्वान्दो खेलाडी निमा गुरुङको भनाई छ । अन्र्तराष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिताका लागि आफुहरुले पनि पर्याप्त समयको तयारी गर्न र अन्र्तराष्ट्रिय एक्स्पोजरहरुबाट प्रशिक्षण लिने मौका पाए नजिता थप राम्रो दिन सकिने उनको बुझाई छ ।
त्यस्तै राज्यले खेलाडीवाट पदकको अपेक्षा राख्ने तर राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण र खेलाडीको प्रशिक्षणमा ध्यान नदिने परम्पराले खेलाडीले उच्चस्तरको प्रर्दशन गर्न नसक्ने स्क्वास प्रशिक्षक हिरा बहादुर थापाको भनाई छ । तर यता, घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि यो पटक खेलाडीको प्रशिक्षणलाई सबैभन्दा व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त बनाउने दावी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशव कुमार विष्ट भन्छन् ‘यसपटकको प्रशिक्षण ईतिहासकै सबैभन्दा व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनेछ’ ।
यसअघी जेठको पहिलो साताभित्र राष्ट्रिय टिमको तयारी बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने, बजेट निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गर्ने, साग तयारीको कार्ययोजना बनाउने र प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, सागको आयोजना तथा सञ्चालनमा मुल नेतृत्व नै गैरजिम्मेवार बनि दिदाँ प्रतियोगिता तयारी निकै सुस्त देखिएको छ । त्यसैले देशको प्रतिष्ठासंग जोडिएको यति ठुलो प्रतियोगिता तोकिएकै समयमा भव्य रुपमा संचालन गर्न सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भएर लाग्ने कि ?
कस्तो चल्दैछ सागको तयारी ?